Cadaadiska ka imanaya Trump, heerarka maydhashada ee dib loo eegi doono - Warqadaha Casaanka & Madowga ee Wargeysyada-Jikada, Qasabadaha Buuxi Weelka, Qasabada Musqusha | WOWOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Cadaadiska ka imanaya Trump, heerarka maydhashada in dib loo eego - Wargeyska Casaanka & Madowga
2020 / 09 / 10 QoondayntaTilmaamaha qasabada 911 0
(Washington) Dowladda Mareykanka ayaa raadineysa inay dejiso heerarka lagu ilaalinayo biyaha qubeyska ka dib markii Donald Trump uu ka cawday cadaadis yar oo xagga biyaha ah oo timahiisa saaran.
Wakaaladda Warbaahinta Faransiiska
Waaxda Tamarta ee Mareykanka ayaa Arbacadii soo jeedisay in wax laga beddelo heerarka madaxyada maydhashada, si loogu oggolaado rakibidda dhowr madax hal meel oo keliya, hab looga gudbayo tallaabooyinka lagu keydinayo biyaha ee la dejiyay George HW Bush.
Heerarka la aasaasay 1992 waxay xadidayaan socodka biyaha 9.5 litir daqiiqadii qubayska waxaana la go'aansaday 2011 in qubeyska diyaarado badan ay ahaayeen aalad gaar ah oo xadidan loo adeegsaday, ayaa lagu xusay majaladda Forbes .
Isbedelka uu damacsan yahay maamulka Trump, xaddidaadda qulqulka biyaha ayaa lagu dabaqi doonaa diyaarad kasta oo biyo ah halkii ay ka ahaan lahayd nidaamka oo dhan.
Ku dhawaaqista ayaa timid kadib cabashooyin ka yimid Donald Trump, oo caan ku ah jawiga cimilada, oo ku saabsan ku filnaan la'aanta cadaadiska biyaha ee qubeyska.
“Madaxa qubayska - waad qubeysaa, biyuhu ma socdaan. Waxaad dooneysaa inaad dhaqdo gacmahaaga, biyuhu ma socdaan. Haye maxaad sameyneysaa? Miyaad halkaa ku sii nagaaneysaa mise qubays dheer? Sababtoo ah timahayga - ma aqaan adiga adiga, laakiin taydu waa inay ahaataa mid hagaagsan. Dhamaystiran, ”ayuu madaxweynuhu u sharaxay bishii Luuliyo weriyeyaasha Aqalka Cad.
Bilyaneerka reer jamhuuriga ah wuxuu u dagaalamayay dagaal uu ku kordhinayo qulqulka iyo cadaadiska biyaha ee goobaha musqusha mudo dhowr bilood ah.
"[Les gens] waxay qubeystaan, biyuhu waxay ku yimaadaan dhibco yaryar, si tartiib tartiib ah ayey u socdaan, dadku waxay musqusha ku maydhaan 10 jeer, 15 jeer, halkii mid keliya, waxay ku dambeeyaan isticmaalka biyo badan," ayuu Donald Trump u xaqiijiyay bishii Diseembar.
Hay'adda Ilaalinta Deegaanka (EPA) "waxay si taxaddar leh u baari doontaa saxamada iyo qubeyska iyo waxyaabaha kale ee ku yaal musqulaha," ayuu yiri.
Qorshahani wuxuu ku biirayaa "cabashooyinka soo noqnoqda ee aan sal iyo raad lahayn ee Donald Trump" ee "musqulaha, qasabadaha iyo waxyaalaha kale ee guryaha lagu rakibo waxaa lagu burburiyey heerarka waxtarka tamarta federaalka," ayuu yiri Andrew deLaski, oo ah agaasimaha ururka mashruuca wacyi gelinta heerarka qalabka, u heellan keydinta tamarta.
Sida laga soo xigtay isaga, tallaabooyinka cusub ee lagu soo bandhigay madaxyada maydhashada waxay "baabi'in doonaan biyo iyo tamar aad u tiro badan, taas oo kordhin doonta biilasha iyo qiiqa gaaska lagu sii daayo", ayuu ku yidhi boggiisa.
Hore:: 10ka tuubbooyin ee buufiyuhu ugu sareeya ee aad ka iibsan karto khadka tooska ah Next: Qiyaasta Suuqa Weelasha Qasacadaha iyo Saadaasha (2020-2027)
2021 / 05 / 13 1917
2021 / 05 / 09 1481
2021 / 05 / 08 1353
2021 / 02 / 04 1143
2021 / 02 / 03 1134
2021 / 02 / 03 1160